महामारीका बेला के गर्ने के नगर्ने ? यस्ता छन् मनोविद् जोशीका सुझाव
कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, १३ चैत्र
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को त्रास छ । कतिपय मानिसले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरेर आममानिसलाई झन त्रसित बनाउने काम गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभावबाट हाम्रो समाज पनि टाढा रहन सकेको छैन ।
केही दिनअघि मात्र नर्भिक अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी छन् भन्दै अफवाह फैलाउने रामेछापका विवेक मगरलाई प्रहरीले पक्राउ नै गर्नुपर्‍यो ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो, पछिल्लो समय यस्ता प्रकारका अफवाह फैलाउने र त्यसका आधारमा आममानिसले धारणा बनाउने गरेरका छन् ।
यस्तो महामारीको समयमा आरामसँग बस्न केके गर्न हुन्छ ? केके गर्न हुँँदैन ? भन्नेबारे वरिष्ठ मनोविद् एवं ‘द स्कुल अफ नेपाल’का संस्थापक अध्यक्ष पदमराज जोशीका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत छन् ।
यी कुरा गर्न हुँदैन
महामारीको समाचार तपाईंको टाइमलाइनमा नराख्नुहोस् । तपाईंको उद्देश्य पवित्र भए पनि उक्त सूचनाले अरूलाई डर, त्रास र चिन्ता पैदा गरिदिन्छ र आत्मबल कम्जोर बनाइदिन सक्छ ।
सबैको आक्रोश/गुनासो राज्यप्रति हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो । तर, हामी राज्य र सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेतृत्वप्रति सचेत, जानकार छौँ । सरकारको भर पर्नुभन्दा यो बिपत्तिको निराकरण गर्न गठित समितिका संंयोजकलाई व्यक्तिगत सम्पर्क गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत् खबरदारी/ध्यानाकर्षण गर्ने ।
पत्रकार मित्रहरूले महामारीको समाचार र संक्रमितबारे धेरै महत्त्वका साथ ब्रेकिङ गर्ने होडबाजी नगरौँ । सकिन्छ भने यो बेला कमेडी, सुखद, जीवन जगतका अन्य सकारात्मक समाचारलाई बढी महत्त्व दिऔँ । हामीले जीवित व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यबारेमा ख्याल गरौँ । कोरोनाबाट जोगिन सचेत रहनु, व्यक्तिगत सरसफाइ गर्नु जरुरी छ । सकारात्मक खालका समाचार प्रकाशन गरौँँ ।
फेसबुक वा अरू सञ्जालमा घरिघरि त्यही नकारात्मक सूचना प्रवाह गर्नेहरूले ध्यान दिऔँ कि यो तपाईंको मुहार जस्तै हो र मुहारमा तपाईंले नकारात्मक सन्देश दिंँदा तपाईंलगायत तपाईंका साथीहरूमा त्यसको डर, त्रास र चिन्ता उत्पन्न हुन सक्छ । यसले गर्दा व्यक्तिको आत्मबल कमजोर भएर रोगविरुद्ध लड्ने शक्तिमा ह्रास आउन सक्छ । यसर्थ आफैँलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् र आत्मबल बढाउने सामग्री दिनुहोस् ।
यी कुरा गर्न हुन्छ
कुनै सूचना घरिघरि दिमागा राख्दा दुवै नकारात्मक वा सकारात्मक असर हामीमा पर्छ । तसर्थ अहिले कोरोनाका नकारात्मक सूचनाबाट आफूलाइ सीमित (टाढा) राख्नुहोस् ।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्ति हामीलाई मनपर्छ, कुनै पर्दैन । यसको अर्थ यो बुझ्नुपर्छ कि व्यक्तिको आकृति एक सूचना हो र यसले हाम्रो दिमागबाट निस्किने रसायनलाई प्रभावित गर्छ अनि हामी त्यो व्यवहारमा देखाउँछौँँ ।
आत्तिनुपर्दैन, यो कम्जोर भाइरस हो । केवल आफ्नो भावना र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् ।
दैनिकी तालिका बनाउनुहोस् । कम्तीमा ६-८ घन्टा अनिवार्य सुत्नुपर्ने समावेश गर्नुहोस् ।
खानपिनमा अरू बेला जस्तै रहनुहोस् (शाकाहारी बन्नुहोस्) ।
सङ्गीत आआफ्नो स्वास्थ्य र रुचिअनुसार सुन्नुहोस् । रक्तचाप कम हुनेले अलिक रक, पपलगायत उच्च तीब्रता हुने तथा बढी हुनेले सदाबहार मेलोडियस वा मन्त्र आदि इत्यदि सुन्ने गर्नुहोस् । कम्तीमा १ घण्टा यो दैनिकी अनिवार्य राख्नुहोस् ।
बच्चाहरूलाई र एकदम उमेर पुगेका आमाबाबुहरूलाई सेवा र सत्सङ्ग गर्ने यो उपयुक्त समय हो । तसर्थ उनीहरूसँँग स्वाभाविक तरिकाले प्रस्तुत हुनुहोस् ।
कम्तीमा १ घण्टा नाच्न आउँदैन भने पनि रमाइलो वातावरण बनाउनुहोस् । य‍ो प्रायः साँझ अर्थात् रात्रिभोजपूर्व गर्नुहोस् ।
यस्तो अभिनय गर्नुहोस् कि बच्चाहरू अनि आमाबुबालाई यस्तो लागोस् कि आहा ! यस्तो कस्तो रमाइलो हगि !
घरमा एकदम आनन्ददायी वातावरण बनाउनुहोस् । वयस्कहरूको मुख्य दायित्व हो यो । तसर्थ बोल्दा अभिनय गर्नुहोस् । रिस उठ्ने, झगडा हुने बोली बन्द गर्नुहोस् ।
भान्सामा कम्तीमा प्रत्येक सदस्यले केही न केही सहयोग गर्ने गर्नुहोस् ।उदाहरणका लागि, एक जना मेरो विद्यार्थी स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टर अध्ययनरतले ५ जनाका लागि आवश्यक पर्ने दालमा १ हजार ४ सय २८ रातो दालका गेडाहरू र १ हजार १ सय २८ कालो दालका गेडा रहेछ्न् भनी पोस्ट गरिन् । द‍ोस्रो दिन घरमै रहेका बेला मैले सोधेँँ, 'नानी, कति जना र कति समय लाग्यो गन्न ?' उनले २ जनालाई करिब २ घण्टा लागेको बताइन् । अर्थात् आफूलाई व्यस्त राख्न विभिन्न आन्तरिक यस्ता उपायहरू निकाल्नुहोस् र रमाइलो गर्नुह‍‍ोस् ।
नियमित ब्यायाम, अभ्यास, योगा र ध्यान गरौँँ । प्राथमिक सहयोगका लागि तालिमप्राप्त व्यक्ति, मनोविमर्शकर्ता, मनोविद्, मनोचिकित्सकहरूसँँग सहयोग मागौँ ।
सबैले धैर्य र आत्मबल बढाउने काम गरौँ । घरभित्रै खेलिने खेल खेलौँ, खेलाऔँ । यो अवसर सम्झिएर सावधानी अपनाऔँँ । घरमै बसौँ । कोरोनाको समयावधि सकिएर निष्क्रिय भएपछि शान्त हुनेछ ।
कृपया शान्त होऔँ । एकअर्काबीचको भौतिक (शारीरिक) दूरी कम गरौँ । सामाजिक दूरीलाई सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार प्रविधिबाट आफ्ना नातेदार, इस्टमित्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १३, २०७६, ०४:१७:००
मजदुरलाई ३० केजी चामल २ प्याकेट नुन (कसलाई के ? सूचीसहित)
लकडाउन : प्रहरीको एउटा गल्ती, जसले सङ्गठन नै आलोचित बनायो
एपीएफले बनाउन लागेको १ सय ४० बेडको कोरोना अस्पताल अन्तिम चरणमा